Firefox 86 Inouya neKubheka kweKuki Kudzivirirwa, Mufananidzo-mu-Mufananidzo Kuvandudza uye Zvimwe | Linux Vakapindwa muropa
Iyo itsva vhezheni yeakakurumbira webhu bhurawuza Firefox 86 yakatoburitswa kare uye nekuwedzera pakuunza nhevedzano yezvigadziriso zvebug uye kugadzirisa kwemukati, iyo vhezheni itsva inopa akati wandei anonakidza maficha maficha, ayo maAki Cookie Kudzivirirwa anomira kunze.
Mune iyi vhezheni itsva yeFirefox 86, solid mode, inogonesa yakazara cookie chengetedzo modhi, umo mune yega uye yekuchengetera yekuchengetera makuki inoshandiswa kune yega yega saiti.
Iyo nzira yakatarwa yekuzvitsaura haibvumiri kushandiswa kwemakuki kuteedzera kufamba pakati pesaiti, sezvo makuki ese akaiswa kubva kumabato echitatu akaisirwa saiti izvozvi zvave kubatanidzwa kune saiti huru uye hazvifambiswe kana mabhuroko aya awanikwa kubva kune mamwe masaiti.
Sezvakasiyana, kugona kwemakuki pakati pesaiti kwakasiirwa masevhisi asina hukama ine mushandisi yekutevera, semuenzaniso, inoshandiswa kune imwechete yekusimbisa. Ruzivo nezve yakavharwa uye inobvumidzwa kuyambuka-saiti makuki inoratidzwa mumenyu inoratidzwa nekudzvanya chiratidzo chedziviriro mubara rekero.
Iyo nyowani nyowani yekutarisa gwaro kusati kwadhinda kugoneswa kune vese vashandisi uye kusangana pamwe neprinta's system kumisikidzwa yakapihwa.
Iyo nyowani nyowani inoshanda nekufananidza neye muverengi maitiro uye inotungamira kuvhurwa kwekutarisa mune yazvino tebhu, kutsiva zviripo zvirimo. Rutivi rwepadivi runopa maturusi ekusarudza purinda, kugadzirisa marongero epeji, kushandura marongero ekudhinda, uye kudzora kana misoro uye kumashure zvakadhindwa.
Kupa mashandiro yezvinhu zveCanvas uye WebGL akaendeswa kune imwe nzira inotarisira kuburitsa mashandiro kuGPU. Iko shanduko yakavandudza zvakanyanya kugadzikana uye mashandiro emasaiti anoshandisa WebGL neCanvas.
Uye zvakare, ese vhidhiyo yekumisikidza kodhi yakaendeswa kune itsva RDD maitiro, ayo anovandudza chengetedzo nekuzviparadzanisa mavhidhiyo madhiraivhu akasiyana maitiro.
Kudzivirirwa kunoenderana ne "-fstack-clash-protection" sarudzo, kana yakatsanangurwa, iyo compiler inoisa poll poll (probes) mune yega yega static kana inesimba stack mugove kuti uone stack inowanda uye block stack / mharadzano yekurwiswa. Stack ine hukama nekutungamira kwe tambo yekuuraya kuburikidza nemapeji ekudzivirira emaki.
Kune rimwe divi, zvinoratidzwa izvo rutsigiro rweAVIF fomati fomati inogoneswa nekutadza (AV1 mufananidzo fomati), iyo inoshandisa ye-intra-furemu yekumanikidza matekinoroji kubva kuAV1 vhidhiyo yekukodha fomati.
Mudziyo wekuparadzira yakadzvanywa dhata mu AVIF yakafanana zvachose neHEIF. AVIF inotsigira HDR (yakakwirira inesimba renji) uye yakafara gamut mifananidzo, pamwe neyakajairika simba renji (SDR) mifananidzo. Pakutanga, ichigonesa AVIF yaida kumisikidza "image.avif.enabled" paramende mune nezve: config.
Imwe shanduko inomira pachena ndeyekuti mune iyi nyowani vhezheni yeFirefox Tsigiro inosanganisirwa kuvhurwa panguva imwe chete kwemavhidhiyo akawanda windows muPikicha-mu-Mufananidzo modhi.
Chekupedzisira, zvinooneswawo izvozvoe tsigiro yekuyedza SSB modhi yakamiswa (saiti-yakatarwa bhurawuza), iyo yakaita kuti zvikwanisike kugadzira yakaparadzaniswa nzira yekusaiti kuvhura isina browser interface zvinhu, iine rakaparadzana icon pabhara rebasa, senge zvizere OS mashandisirwo
Zvikonzero zvekurega rutsigiro runotaurwa sezvinhu zvisina kugadziriswa, zvinokatyamadza mabhenefiti evashandisi ve desktop, zvishoma zviwanikwa uye chishuwo chekutarisa pazvinhu zvekusimudzira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Firefox 86 inouya neKuki Cookie Kudzivirirwa, Mufananidzo-mu-Mufananidzo zvinowedzera uye nezvimwe